အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: အန်တီချမ်း ဘယ်လိုလူလဲ.......................?
ကဲကဲကဲ သားတို့သမီးတို့ ကိုကိုတို့ မမတို့ တီတီတို့ ဦးဦးတို့
အောက်ဖော်ပြပါပုံများကိုကြည့်၍ အန်တီချမ်း သည်
မမကွမ်အမှူးပြုသော ဒေါ်စံရှား၊ဦးစံရှား၊ကိုစံရှား၊မစံရှား စသော
Posted by တီချမ်း at 9:40 PM
Phyo Maw March 14, 2009 at 10:14 PM
အိမ်ရှင်းရင် ရှင်း ပေါ့
ခုတော့ သူက စဉ်းစားပါဦးလေး ဘာလေးနဲ့
ပြောရခက် မန့်ပြန် lol
သီဟသစ် March 14, 2009 at 10:21 PM
ဟယ်ဘာတွေလဲကွယ် Nescafe တွေရော jelly တွေေ၇ာ DVD တွေလား စာအုပ်တွေလား။
အစားကောင်းကောင်းစား ၍ အနုပညာကို နှစ်သက်သူလို့ ဆိုကြပါစိုရဲ့။
ဘာတွေတုန်း March 14, 2009 at 10:40 PM
သေချာတာတော့ အစားသောင်းကျန်းသူ ဖြစ်ရမည်။ အဟိ။ ပစ္စည်းအပုံ၏ ၃ပုံ၂ပုံခန့်သည် အစားအသောက်များသာ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် အကုန်လုံးမှာ အလွယ်တကူဖွင့်ဖောက်စားလို့ရသော မုန့်များ၊ကြက်ဥများ ဖြစ်သည်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ဟင်းသိပ်မချက်စားဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းရသည်။
မေစံရှား ဘာတွေတုန်း :P
ဖိုးစိန် March 14, 2009 at 11:27 PM
ရယ်ဒီမိတ် အစားအစာများကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် ပျင်းသူဖြစ်...
နို့ ကြက်ဥ ချောကလက်..အဟိ...
ကိုယ်တိုင်က သိလိုစိတ် စပ်စပ်စုစုနိုင်သူဖြစ်..
စေ့စပ်သေချာ အသန့် ကြိုက်သူဖြစ်...
မှားခဲ့ရင် ပြောင်းပြန်ပြောတယ်လို့ မှတ်.
မေ့သမီး March 14, 2009 at 11:42 PM
နည်းနည်းမန့်မယ်နော်။ ဟိ။ Drama ကားတွေ၊ Comedy တွေလို့ထင်တယ်။ အခွေတွေကိုကြည့်ရတာ။ (အခွေကြည့်တောင်ကြည့်ချင်တယ်။ :P) စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အချစ်၊ ကြည်နူးဖွယ်ရာ နူးညံ့တဲ့အချစ်စစ်မျိုးလိုချင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ အစားအစာတွေကိုကြည်တော့ အချို၊ အချဉ်တွေများနေတာတွေ့တဲ့အတွက် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်သူဖြစ်ရမယ်။ စိတ်ကောက်တတ်သူဖြစ်ရမယ်။ ဟိ။ မန့်တော့မန့်ခဲ့ပြီ။ မဟုတ်ရင်လည်း ဘွာတေး။
ဗီလိန် March 14, 2009 at 11:52 PM
အခွေတွေ မုန့်တွေ ကော်ဖီတွေ သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာမကြီးပါ။
သက်ပိုင်သူ March 14, 2009 at 11:55 PM
တီချမ်းသည် စားစရာကို ဖြစ်သလို စားတတ်သူပါ။ ကြက်ဥများများသောက်ပြီး တစ်ခုခုအားကောင်းလည်းလုပ်တတ်ပါတယ်။ Ready-made စားတာတွေများလို့ မော်ဒယ်လေးတွေလိုတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘီယာလည်းကြိုက်တော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ တစ်ခုတော့ ကောင်းသည် သွားတိုက်ဆေးဘူး ဆောင်ထားသူဖြစ်သောကြောင့် အချိန်မရွေး နေရာမရွေး လူတကာနဲ့ နမ်းနိုင်ပါသည်။
တီချမ်းသည် ရုပ်ရှင်အလွန်ကြိုက်သောသူပါ။ အချစ်ကားနဲ့ ယိုးဒယားကားတွေ တော်တော်ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်တတ်သူပါ။ brokeback mountain, Siam of love ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တီချမ်းကို … အဟီး ဟီး…..။ သူရဲကားတွေတော့ သိပ်မကြည့်နဲ့နော်။
mgnge March 15, 2009 at 1:45 AM
Ready made အစားအစာများ ကိုကြ့ည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ အပျင်း ကြီး သူဖြစ်လတံ..။
စာအုပ်ပုံ ကြီး ကိုကြည့်ခြင်းအား မျက်မှန်ပါဝါ 300 လောက်ရှိလတံ့..။
အစားအသောက် များမှာပစ္စည်းပုံထက် ကြီး သဖြင့် ပေါင် 600 ခန့် ရှိသော မော် ဒယ်ပြိုကြီး ဖြစ်လတံ..။
ကော်ဖီမစ် ထုပ် ကိုကြည့်ခြင်းအား ဖြင့် ညဘက်စောစောမအိပ်ပဲ ကောင်သူငယ် လေးများအကြောင်း စဉ်းစား တတ်လတံ..။
ဤသည်ကား ကျွန်ုပ် ဆုံဒေါက်ဂျော်ဂျီး မောင်ငယ် ဧ။် စုံစမ်းသိရှိရသော အချက်အလက်များပေတည်း ............။
ကောင်းကင်ပြာ March 15, 2009 at 2:27 AM
နေမကောင်းတကောင်းလေ၊ အဲဒါတွေကြည့်ပီး စားချင်မှာဆိုးလို့ မမန့်ခဲ့တာ၊ ခုတော့ မန့်ကြည့်မယ်၊ သီချင်းကြိုက်၊မုန့်ကြိုက်၊ ရုပ်ရှင်ကြိုက်၊ အချဉ်တွေကြည့်ပီး၊တစ်ညလုံး ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ မိုးလင်းမဲ့သဘော၊
အမက ဒီရက်တွေ နားနေလို့ နေ့နဲ့ ညနဲ့မှားနေတာလေ၊ တနေလုံး အိပ်ပြီးညကျ ကြောင်တောင်တောင်ပေါ့:)
ဖိုးဂျယ် March 15, 2009 at 12:07 PM
အရှေ့ အရှေ့က ဆရာ/မကြီးတွေ ပြောသွားတာ ပြည့်စုံနေသဖြင့်
ပိန်းတိန်းတိန်းကောင်လေး ခင်မျာ့ ထပ်ဖြည့် မပြောကြားတတ်တော့ပေ
masumon March 15, 2009 at 12:40 PM
ကြက်ဥ ကဒ်လိုက် သောက်တဲ့ ပုံထောက်ရင်တော့... ဗီဒီယို ကြိုက်မယ့်ပုံပဲ ဟိဟိ
Anonymous March 15, 2009 at 1:04 PM
အစားအသောက်တွေကြားထဲ ဘယ့်နှယ့် LUX ဆပ်ပြာနဲ့ သွားတိုက်ဆးဘူးက ရောက်နေရတာတုန်း။ ဘာလဲ ဗီဒီယိုကြည့်ရင်း အဲဒါတွေပါ ကစ်မယ့်သဘောလားးးးး တီတီချမ်းနော်... ပေါက်ကရတွေ လူမြင်အောင် လုပ်ပြနေ... အကုန်သိကုန်ရင် အခက်ပဲ...
သူမလေး March 15, 2009 at 2:27 PM
ဘာလည်း ညာလည်းတော့ဒို့သိဘူး၊ teleroneချောကလက်၂တောင့်နဲ့ ကော်ဖီထုပ်ယူပြီးလစ်ပြေးပြီ။ အန်ကယ်လ်ချမ်းရေ....တာ့တာ။ အိပ်ပြီ။
Anonymous March 15, 2009 at 2:54 PM
အင်း.....ဒီအမှုကတော်တော်ကြီးတယ်။ငါပေါ့ပေ့ါတန်တန် မန့် လို့ မဖြစ်
ချေဘူး(မဟော်သဓာ လေသံ...အလဲ့ :P ) ။နို့ မို့ ဆို..ငါ့တီတီ ..ဟိုအမွှာ
နှစ်ယောက်အပြင် အများတကာအလည်မှာ အရှက်ရရချေရဲ့။ အင်း..မဖြစ်ချေဘူး.....အရေးကြီးဆုံး အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမှာက...တီတီချမ်း..
အဲ့ဒီ့က မုန့် တွေသမီးဆီကို အရင်ပို့ လိုက် ။ :P
ဟိုနှစ်ယောက်လုံးဝမသိစေနဲ့ ...သူတို့ လာလုကြလိမ့်မယ် ..:P
ဟဲဟဲ..နောက်တာပါ..တီတီချမ်း..အဲ့ဒီပုံတွေ မပြလဲ..ဒို့ တီချမ်းက အရမ်း
ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ..အားလုံးကသိပြီးသား ...ပြုံးနေလားဟင်..:)
khin oo may March 15, 2009 at 5:13 PM
ပစ္စည်းများကိုဆိုဖာပေါါ်တွင်တင်ထားသည်ကို ကြည့်၍။ ကြမ်းပြင်ကို တံမျည်စည်းမလှည်းရသေးကြောင်းပေါါ်လွင်သည
အိမ်ခန်းတွင်းတွင် မရီုက်သည်မှာ အိမ်ခန်းတွင်းတွင် မမြင်သင့်သည်များရှိနိုင်သည်။
အခွေများစွာကြည့်သည်ဘာအခွေ များဖြစ်မည် ကိုတော့မလေ့လာရေသေး. Drama ကိုကြိုက်သူဖြစ်နိုင်သည
ဆပ်ပြာရည်သုံးသည်ကိုကြည့်၍ နူးညံသူဖြစ်မည် ဟုတော့ခန့်မှန်းတန်ရသည်။
Anonymous March 15, 2009 at 5:28 PM
အန်တီချမ်း March 15, 2009 at 5:31 PM
မမကွမ် သူများပိုစ့် နာမည်ကိုပြန်သုံးသွား စကားလုံးရှားပါးနေပြီထင့်
လင်းကြယ်ဖြူ March 15, 2009 at 6:59 PM
စားပြီး သ္ဂားတိုက်ရေချိုးလုပ်ပုံရ၊ကောင်း Habbit၊
ကြက်ဥ Half-fried အားရှိ၊ကောင်း၊နဲနဲကျွေး....
နန်းညီ March 16, 2009 at 12:57 PM
တီချမ်း = တီချမ်းပေါ့
GANGSTER March 24, 2009 at 2:43 PM
ဘယ့်နှယ့် LUX ဆပ်ပြာနဲ့ သွားတိုက်ဆးဘူးက ရောက်နေရတာတုန်း။
တီချမ်းသည် စားစရာကို ဖြစ်သလို စားတတ်သူပါ
Yim Mar May 29, 2014 at 12:19 PM
အဲဒီတော့ ကျွန်တော့်လို လူစားမျိုးနေမှာပေါ့ Lol
တီ ချမ်း ၏ ချစ်သူများ......................
ကျေးလက် နဲ့ မြို့ပြ
မမြင်ခြင်းများ ၁၊ ၂၊ ၃။ (၃ ပုဒ်တွဲကဗျာ )
H5 N1 နဲ့ တီချမ်း ဆားချက်ခြင်း
ချစ်ရတဲ့ မီးဏီ ရေ….(သဇင်ဏီသို့ ပေးစာ)
စပါးနှံ နံ့ (ဘုတ်ဆုံအတွက် သီချင်းလက်ဆောင်)
နန်းညီ နှင့် ၁၆ မတ် ၂၀၀၉
မမ ကို သတ်မယ်.....................
မေ ည ၊ နွေ ည